ခင်ဇော် ၏ သည်းခံရခြင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခင်ဇော် ၏ သည်းခံရခြင်းများ
ခင်ဇော် ၏ သည်းခံရခြင်းများ
Posted by ဇီဇီ on Nov 11, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Politics, Issues, Society & Lifestyle | 34 comments
သည်းခံ ခင်ဇော် သည်းခံ
– မတရားတာတွေလည်း သည်းခံ
– မှားတာတွေ လာပြောလည်း သည်းခံ
– ဉာဏ်နည်းနည်း ကြိမ်းဝါးမှုတွေလည်း သည်းခံ
– ဆိုက်ဝါးတွေလာအာနေတာလည်း သည်းခံ
– မဖြစ်နိုင်တာအော်နေလည်း သည်းခံ
– သတင်း အမှားတွေ ရှယ်နေကြတာကိုလည်း သည်းခံ
– သည်းခံခြင်းနဲ့ အသားမကျသေးတာကို သည်းခံ
– ချစ်လို့ သည်းခံ
– ကြောက်လို့ သည်းခံ
– ခံလက်စနဲ့ သည်းခံ
အနည်းဆုံး ၃ လ – အများဆုံး ၆ လ မှာ..
လူထုခေါင်းဆောင် ၂၇ နှစ် လုံးလုံး သည်းခံခဲ့တာ ရေစုန်မျောတာမျိုးး အဖြစ် မခံနိုင်ဘူးးးးး
ခုမှသိလာတာက သူ ….
ဒီ လူယုတ်မာတွေ ကို
၂၇ နှစ် ကာလလုံးး
တော်ရုံ ခန္ဓီပါရမီ မဟုတ်ဘူးးပဲ..!!
၁၀ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၅
ရွေးကောက်ပွဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိကြောင်း အီးယူစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ဝေဖန်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ မညီတဲ့အပြင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်း မရှိဘူးလို့ ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
အဖွဲ့က သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေကို သတင်းမီဒီယာတွေကို ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ EU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Alexander Lambsdorff က ကြိုတင်မဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောပါတယ်။
“မိမိတို့ အီးယူအဖွဲ့အနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေရတာက မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေပြင်ပမှာ နေထိုင် တဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေ့ရှိရတာက ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရမယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းက ကြိုတင်မဲပေးသူတွေရဲ့ မဲတွေကိုင်တွယ်ရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်တာကို တွေ့ရပါတယ်”
ဒါ့အပြင် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ အပြင်မှာနေထိုင်သူတွေပေးတဲ့ ကြိုတင်မဲ စာရင်းတွေ အတိအကျကိုလည်း မသိရဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲရုံတွေကို အချိန်မှန်မှန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် မဲရုံမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက အချိန်ပြည့်ရှိနေတာကြောင့် မဲရုံတွေနဲ့ မဲပေးတာဟာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကောင်းမွန်တယ် လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကို အီးယူအဖွဲ့က လေ့လာသူ ၁၅ဝ လောက်နဲ့ မဲရုံပေါင်း ၅ဝဝ ကျော် ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
EU နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ၉၅% နိုင်ပါတယ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီင်္း ထုတ်ပြန်တာတောင်…
ပျော်ရမှာတောင် ဟိုလူ့ကို အားနာ…ဒီလူ့ကို အားနာ..ဟိုလူက ဆူပူ…ဒီလူက ဆူပူ ဖြစ်မှာစိုးလို့ မှန်ရှေ့မှာ တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့် ပြန်ပြုံးပြပြီး အောင်ပွဲခံနေရတဲ့… ဘွ…
မြန်မာသိ…ကမ္ဘာသိ နိုင်ပါပြီဆိုတာတောင်မှ အခွက်ပြောင်ပြီး လွှဲမပေးမှာစိုးလို့ သုံးလကို (ကိုယ့်ပါးလာရိုက်ရင်တောင်) ဆူပူမှုဖြစ်မှာ စိုးလို့ ပြန်ပြုံးပြနေရမယ့်… ဘွ…
ရေကန်ကြီး အလယ်ခေါင်ထိုင်ပြီး ရွေးကော်က သုံးနာရီခြားတစ်ခါ ချတိုက်တဲ့ ရေတစ်စက်ချင်းကို အာသာငန်းငန်းမျှော်သောက်နေရတဲ့ ဆင့်အ၀ှာ ခွေးမျှော်သလို မျှော်နေရတဲ့… ဘွ…
ကလေးကစားသလို ငါ့ဥစ္စာ ပြန်ပေးဆိုပြီး ကလေးကွက် နင်းဦးမလားဆိုပြီး အတိတ်တစ္ဆေ အမြဲခြောက်ခံနေရတဲ့… ဘွ…
ခိုးတာကို ခိုးမှန်းသိတာတောင် ဆူပူလိမ့်မယ်ဆိုပြီး သူခိုးတောင်ရဲရဲ မဖမ်းရဲတဲ့… ဘွ…
ဘာမှ လုပ်မပြရသေးဘူး…တွေ့ကြသေးတာပေါ့…လို့ ကြိုကြိမ်းထားကြသူတွေကို ဖြစ်လာမှာပေါ့ လို့ ကြို လျှောက်လဲချက်ပေးနေရတဲ့ …ဘွ…
တသက်လုံး စောက်သုံးကျတာ မလုပ်ခဲ့လို့ ပြည်သူက ဒဏ်ခတ်ပြီး မဲရှုံးသွားတဲ့ သူတွေကိုတောင် သနားပါတယ်လို့ မရေးခဲ့ရင် အလိုလို ကိုယ်က မေတ္တာစိတ်ခေါင်းပါးသူလို့ အထင်ခံရမှာစိုးလို့ မသနားချင်ပါပဲနဲ့ လူအထင်ကြီးခံရအောင် ဇွတ်သနားပြနေရတဲ့…ဘွ…
ဘယ်လို လုပ်ကြဦးမလဲ…ဘယ်လို ယုတ်ကြဦးမလဲ…ဘယ်လို ကုလားဖန် ထိုးကြဦးမလဲ ဆိုပြီး လိုင်းမကောင်းတဲ့ ကြားက ဖွဘုတ်ကြီးဖွင့်..ဖွင့်ပြီး သတင်းလား…အတင်းလား မနည်းခွဲခြားပြီး ဇွတ်ဖတ်နေရတဲ့…ဘွ…
မြန်မာ ပြည်သား တစ်ယောက်ရဲ့…ဘွ…
Credit ကို Johnny Deer ဖဘ က မ လာတာ… ???
Credit to ဇီးကွက်ကြီး
(၁) သူရဦးအောင်ကို ဘာလို့ပြန်ရှုံးသွားသလဲ
(ဖြေ) သန်းရွှေက plan B ပြောင်းလိုက်ပါပြီ သတိပြုရမယ့်အချက်ပါ
(၂) ရှမ်းပြည်မှာ ဘာလို့စစ်တိုက်နေတာလဲ
(ဖြေ) ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီး စစ်တပ်ကို ပြည်သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးသွားမှာစိုးလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးကာ တပ်လှန့်အလုပ်ရှုပ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
(၃) စိုင်းမောက်ခမ်း မဲကိစ္စကိုရှင်းလင်းအောင်မလုပ်ပဲ ဘာလို့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့ အနိုင်ပေးလိုက်တာလဲ
(ဖြေ) လားရှိုး ကျောင်းကုန်း ကျိုင်းတုံ နဲ့ ရပ်စောက်မှာ မတရားမှုတွေကို တမင်လုပ်ပြပြီး ပြည်သူတွေဒေါသထွက်အောင် သွေးတိုးစမ်း ထောင်ချောက်ဆင်နေတာပါ ပြည်သူတွေ ဒေါသထွက်လာရင် လူအုပ်လိုက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် ကြေညာတာကို နောက်ရွှေ့တာမျိုးလုပ်လာနိုင်ပါတယ် ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားနားထောင်နေသရွေ့ ထောင်ချောက်ဆင်လို့မရပါဘူး
(၄) Plan B ဆိုတာဘာလဲ
(ဖြေ) Plan B ဆိုတာ ပြည်သူတွေကြားမှာ ကြောက်ရွံ့မှု စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု တွေဖြစ်လာအောင်နည်းမျိုးစုံဖန်တီးကာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ် မကြာခင် ဒေါ်လာဈေးကို မတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
(၅) ဒီအကြပ်အတည်းတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့ ကျော်လွှားသွားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှိသလား
(ဖြေ) ရှိပါတယ် အခုချိန်ကနေ အစိုးရသစ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့ ၂၀၁၆ မတ်လကုန်အထိ ပြည်သူတွေအားလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားကို တိတိကျကျနားထောင်ရပါမယ် စည်းစည်းလုံးလုံး နိုးနိုးကြားကြားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိရပါမယ် ဘာအကြောင်းနဲ့မှ သွေးဆူတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး စစ်တပ်အောက်ခြေစစ်သည် မိသားစုတွေနဲ့ နားလည်မှုလွဲနိုင်တဲ့ အပြုအမူအပြောအဆိုတွေ ရှောင်ရပါမယ် ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရ အကြပ်စစ်သည်တွေကိုခွင့်ပိတ်ထားပြီး အကြပ်စစ်သည်မိသားစုတွေကို တပ်အပြင်မှာ ညအိပ်ခွင့်မပြုဘူးလို့သိရပါတယ် စစ်တပ်အောက်ခြေစစ်သည်မိသားစုတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကြား နားလည်မှုရှိနေရင် သန်းရွှေရဲ့ Plan B မတိုးနိုင်တော့ပါဘူး…။
Credit to ကိုမှန်ကြီး
စိုင်းမောက်ခမ်း – သူရဦးအောင်ကို နှင့် သန်းရွှေ ရဲ့ နောက်ဆုံးဗျူဟာ ။
အရှင်းကြီးကို ဘာလို့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြသလဲ …
ကျွန်တော်တို့ မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် ၊
( ၁ ) သေချာတာ ဒီလို ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးဟာ ခေါင်းဆောင်ကြီးကလွဲလို့ ဘယ်သူမှအမိန့်မပေးနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်ပဲ ၊
( ၂ ) ဒေါက်တာစိုင်းမောင်ခမ်းဟာ သူတို့အတွက် အရေးကြီးသူတယောက် မဟုတ်ပဲ .. တနည်းအားဖြင့် ဦးဌေးဦးလောက် အရေးမကြီးလောက်ပါပဲ
ဒီတယောက်လေးကို ဘာလို့အလုအယက် ပြန်ယူနေရတာလဲ !
ဒီတယောက်ရလို့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကြီး ဘာဖြစ်သွားမှာမိုလို့လဲ !
( ၃ ) အဲ့ဒီဒေသရဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေ ကြို ရှုပ်ထွေးထားကြောင်းတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်ကြပါတယ် –
မဖြစ်ဖြစ်အောင် အတင်းဇွတ်လျှောက် ပစ်နေတဲ့ လုပ်ကြံစစ်ပွဲတွေပဲဟာ ၊
( လိုအပ်ရင် အရှိန်မြှင့်မယ် )
( ၄ ) သူရဦးအောင်ကို ကို အလိုမရှိရင် .. ( သို့ ) အရေးယူလိုရင် ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ကြိုက်သလို ဟိုးအစောကြီးကတည်းက ထုတ်ပစ်လို့ ထောင်ချပလိုက်လို့တောင် ရရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ အခုကျမှ ဒီနည်းကို လာ သုံး နေရတာလဲ !
( ၅ ) ငယ်မွေးခြံပေါက် ဦးအောင်ကိုကတော့ ဒါဘယ်သူ့လက်ရာမှန်း မိမိအကြွေးခံလိုက်ရမှန်း …
ချက်ချင်း သိသွားပြီ ဖြစ်လို့သာပဲ
အညင်သာဆုံး ထွက်ပေါက်လေးဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းနေရုံအပြင် လုပ်ချင်တာလုပ် ဘာမှအထွန့်မတက်ပဲ နှုတ်ပိတ်နေ နေရတော့မှာပေါ့ ၊
( ၅ ) အားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်ပါ – ထင်သာမြင်သာ မတရားမှုနဲ့ ပြည်သူရဲ့ ဒေါသကို အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲအောင် နှိုးဆွပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလွန်းနေတာပါ ၊
ပြည်သူတွေ သတိရှိကြပါ ၊
ကိုယ့်မှာ သူတို့လို သတင်းအချက်အလက် စုံစုံလင်လင် မရှိတာရယ်၊ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ငြင်းမနေချင်တာရယ် (နိုတီ တက်တာ မခံနိုင်ဘူး) နဲ့ ကြိတ်ဆဲ ဖတ်ဆဲ ဆဲ နေရတယ်။း)
အဲ့ဒီ ဘောမ တွေ ရေးချက်က ဘပြောင်ဖတ်မိရင် စိတ်ကုန်ပြီး တရားတောင် ထ စွဲ လောက်ရဲ့။း)
နာ ကတော့ စာရင်းရေးထားတယ်။
သူတို့ လုပ်မှ ဘပြောင်ခမျာ
ပိုက်ဆံ ချေးစားရတဲ့ ဖြစ်လိုဖြစ်
ကျန်းမာရေးမကောင်း ခဏနေရင်ပဲခေါက်ကနဲ ဖြစ်တော့မယ့်လူ ဖြစ်လိုဖြစ်
မာလိန်မှူး ဖြစ်လိုဖြစ် နဲ့…
စေ့စေ့တွေးတော့ ရေးရေးပေါ် ဆိုသလို ဘာလို့ ပြုတ်သင့်သလဲ စာရင်း ပြုစု ပေးနေတာ ကျနေရော။
နာတတ်ရင် အဲ့ဒီ လူတွေ ကို အသရေ ဖျက်မှု၊ နိုင်ငံတော် ကို စော်ကား မှု တွေ နဲ့ တရား တောင် စွဲသင့်သေးတယ် ဟေး ဟေး ဟေးး)
ခုချိန်မှာ သည်းခံခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ လက်နက်ပဲ။
ဒေါသတွေကို အစားနဲ့ မြိုချနေရ။
များများစားပြီး အံကြိတ်ထားတယ် :loll:
ရှေ့က ခေါင်းဆောင်က ၂၇ နှစ်တောင်သီးခံလာတာ တို့တွေ သီးခံရတာ မပြောပလောက်ပါဘူး
ညစ်စွမ်းရှိသရွေ့ညစ်ကြပါလေ သန်းခေါင်အပြင် ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူး
Nyo Mar Lwin
# Copy လုပ်ပြီး share လာတာ #
စိုင်းမောက်ခမ်း ကြိုတင်ခိုးမဲတွေနဲ့ အနိုင်ရသွားတာကို မကြေနပ်လို့ တင်တဲ့ပိုစ့်တွေ ချတ်ဘောက်စ် ကမေးတဲ့သူတွေများလာတယ်
ဝေလွင်တောင်မှ မဲ တစ်ရာကျော်လေးနဲ့ရှုံးတာကို ည၁၂နာရီကြိုတင်မဲနဲ့မကယ်ခဲ့ဘူး
စိုင်းမောက်ခမ်းက တပ်ထွက်မဟုတ်ဘူး တနည်း သူတို့အတွင်းစည်းကလူမဟုတ်ဘူး
USDP အနေနဲ့ လွှတ်တော်တစ်နေရာအတွက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး
ရှင်းပါတယ် ပြည်သူတွေမကျေနပ်အောင် သက်သက်အနိုင်ပေးလိုက်တာပါ
နှမ်းတစ်စေ့နဲ့ဆီမဖြစ်နိုင်တာကိုသိပေမဲ့ face book ကတဆင့် အုံကြွအောင်ကြိုးစားနေတာကို အများသိဘို့လိုပါတယ်
NLD ပြတ်ပြတ်သားသားနိုင်နေရာကနေ အစိုးရမဖွဲ့နိုင်အောင်လုပ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပါ
ခုပဲကြည့် ရွေးကော်က ဒီနေ့ည ၁၁နာရီမှာ ကြေညာရမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်
ဆူပူမှုကိုသွေးထိုးစေမဲ့ ပိုစ့်တွေ မတင်ကြ မရှယ်ကြပါနဲ့
ဒီကိစ္စမျိုးတွေကြိုမြင်လို့ ကျနော်နှစ်၃၀တိတိမပျက်မကွက်တက်ခဲ့တဲ့ မျက်စိဆရာဝန်ညီလာခံကို မတက်တော့တာပါ
ပွဲ ကတော့ လှပြီ..
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်မှာ ရှိရမယ့် အရည် အချင်းး မမြင်ဖူးးရင် သူ့ ဆီ မှာ ကြည့်ကြလို့
အဖေ့သားးများးကို မှာလိုသည် ဟိဟိ…
ဘယ်နှပွင့် မှ မဆိုင်ရဲ တာ ကို သတ္တိ ထင်နေကြ မစိုးးလို့…
မဟာဖို တိုက်ပွဲ ဝင် ကောင်းး အမျိုးးသားးတွေ
သတ္တိ ကဘာ က သိအောင် ပြကြလော့ …
ဦးသိန်းစိန် က ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှ
လုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွတ်ပြီးစီးချိန်မှာ
တွေ့နိုင် မယ်လို့ အကြောင်းပြန်
ဦးရွှေမန်း က ရှေ့တစ်ပတ်အတွင်း
တွေ့နိုင် မယ် လို့ အကြောင်းပြန်
ပူးပေါင်းဆောင် ရွတ်မည် လို့ ပြော
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင် မှ
တပ်ကိုယ်စားလှယ်ကို.. ၅နှစ်ထဲမှာ.. ၁၅%ထိချဖို့ရယ်…။
တိုင်းပြည် အင်ဖရာစရပ်ချာအတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ၁၀၀ ကိုရှာပေးဖို့ရယ်..။
အရမ်းသဘောကျတာက ဘာအချက်ပြီးရင် ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာ ကြိုတွေးထားတာ။
စလုံး က နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တွေ လက်ဖျားခါနေတာ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ… လက်ဖျား..ခြေဖျား.. တကိုယ်လုံးခါသွားလောက်တယ်..။
ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ … စုစုရုန်းရုန်းနဲ့…. အုံးအုံးထ…အောင်ပွဲ သွားခံနေကြတာကိုလည်း..
ကိုယ့်အပေါင်းအဖော်လေးနဲ့ကိုယ် ဝိုင်းလေးဖွဲ့ပြီး.. အောင်ပွဲခံကြပါလား…လို့…
အဲ့လောက် နီနီရဲ ခတ်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကြားမှာ… ဝေးခနဲ ဝါးခနဲ… ဘာမဆို ထဖြစ်သွားနိုင်တယ်…
အဲလို မလုပ်ဖို့ အမေ ပြောထားတယ်လေ။
အဲ့ဒီ လူအုပ်ကြီး ထဲကို ကုလား တစ်ယောက် က နေပြီး အလာဟ် အက္ကဘာ ဆိုပြီး ဝုန်း ပလိုက်ရင် ဖြင့်…..
အတွက်မမှားရင်.. မဘသဂိုဏ်းနဲ့တပ်မဲတွေကို.. ကောင်တာလုပ် မဲချေဖျက်သွားတာ.. မွတ်စလင်+ခရစ်ယန်မြန်မာတွေပဲ..။
တိုင်းပြည်ရဲ့.. ၂၀% လောက်.. (ဒါမှမဟုတ်) မက..ရှိတဲ့ မြန်မာတွေ..။
ဒီလူဦးရေပမာဏ ( silent minority) ကို.. သန်းကောင်စာရင်းကိုင်ထားတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနောက်ပိုင်းမှ ရိပ်မိသွားတယ်..။ အဲဒါကြောင့် ကော့သောင်းလိုနေရာမှာ မွတ်စလင်သုံးပြီးမဲစဆွယ်တယ်..။
သိသလောက်.. သန်းကောင်စာရင်းမှာ.. ကိုးကွယ်ရာဘာသာပါတဲ့မြန်မာ့လူဦးရေစာရင်းမထုတ်ပြန်သေးပါ။ ဒါကိုမသိသေးတဲ့..အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ မိုးနတ်မင်းကယ်လို့….ကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့..။
တစ်နိုင်ငံလုံး မှာ ပြိုင်ဘက်မရှိ အရည်အချင်း ရှိသူ လူထု (အများစု) ချစ်ခင် ကြည်ညို တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ကို ပိုင်ဆိုင်ထား ပါ ရက် နဲ့
အများစု က ထောက်ခံထားပါရက် နဲ့ သူ့ကို နိုင်ငံ ဦးဆောင်မဲ့ အကြီးအကဲ လို့ တရားဝင် နာမည် တပ်လို့ မရ တဲ့ မြေ ………
နဲနဲ လေး တော့ လွဲ နေတယ်။
သည်းခံရမှာမို့ သီချင်းဘဲ နားထောင် နေတော့တယ်။ :-))))
Chancellor .. အဓိပတိပေါ့…။
ဒီနေ့ ငတုံး ပို့(စ) တစ်ခုကနေ မြင်ရတာ အမေရဲ့ သမဒ က ဥသေးစိမ် တဲ့။
၁) ဥသေးစိမ်ကို ရိုသေသူများလာမဲ့ အကွက် (သမဒ နောက်က လေဒီကြောင့်)
၂) နောက်တင်မဲ့ သန်းမဂျီးကို ပြောမယ်ဆိုပြီး မောင်းတင်စောင့်နေတဲ့ ဘောမတွေ တပ်ပျက်
အရပ်သား စစ်စစ် လို့ ပြောတော့ထားတာဘဲ ဇီကလေးရဲ့။
အခု နှစ်ယောက်တောင် ဆိုတော့ ထည့်လိုက်လဲ ကောင်းတာပေါ့။
သူတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့။ ပြောင်းချိန်တန်ရင် အကုန်ပြောင်းရမတဲ့။
ဒါကြောင့်ပြောတာ ကျား တွေများ သံခင်းတမာန်ခင်း နားမလည်ကြဘူး။
အရီး ကတော့ နောက်တစ်ယောက် ကို မိန်းမ တစ်ယောက် တင်စေချင်တယ်။ :-)))
သည်းခံရင်း ရီရီမောမော ဖြစ်ရလေအောင် Facebook ထဲ က ဘီဒီယို လေး မျှဗျစီ။
“မ” “မ” နေရ တဲ့ အကြောင်းရင်းလေး။ lol:-))))
ဟီးဟီးးးး အရီးရေ ထိချက်။
ဒီနေ့ကို သိရတာတွေ အများကြီးးး
ခြံတွေ ခုန်ကြတာ ခုန်ကြတာ ဆိုတာလေ။
အရီး လဲ ကိုယ့် FB ထဲ မှာ မြင်နေတယ်၊ မြင်နေတယ်။
သူကြီးရဲ့ အ​ပေါ်က ကွန်​မန်းမှတ်​ချက်​လုပ်​ရလို့
ဒါဖြင့်​ သူကြီးရယ်​ ခု nld ရှုံးတဲ့ ​ပျော်​ဘွယ်​နဲ့ ရမည်းသင်းဆိုတာက အစ္စလာမ်​ အများစု​နေရာဗျ ဘာလို့ ကြံဖွတ်​နိုင်​သလဲ မိတ္တီလာလည်းများတာပဲ ။ ​နေပြည်​​တော်​မှာ ဒီချုပ်​အနိုင်​များတာ​တော့ သူတို့ဗျူဟာ မှားတာလို့ထင်​တယ်​ ။ အမတ်​​လောင်းစာရင်းထွက်​လာကတည်းက ​ပြောဖို့ အ​ခြေအ​နေ​စောင့်​ကြည့်​​နေတာ ။ ​နေပြည်​​တော်​မှာ အဓိက ပြိုင်​တာက ပါတီသုံးခုထဲရယ်​ ။ တစ်​သီးပုဂ္ဂလ ဆိုတာ​တွေက ​နေပြည်​​တော်​​ကောင်​စီဝင်​​တွေဝင်​တာဗျ ။ အဲ့သာ​ကြောင့်​ သူတို့ချင်းမဲကွဲပြီးရှုံးရတာ ။ နို့မဟုတ်​ရင်​ ဒီ​လောက်​ပက်​ပက်​စက်​စက်​ကြီးရှုံးဖို့မရှိ ။ ​နေပြည်​​တော်​မှာ ဒီချုပ်​က ​ဘောလုံးစကားနဲ့​ပြောရရင်​ အုပ်​စု​ချောင်​သွားတာ ။
မဲပေးသူ သန်း၃၀ရဲ့.. ၆သန်းဟာ ဟိန္ဒူအပါအ၀င်.. ဘာသာမတူသူတွေဆိုတာတော့ သတိထားကြည့်ပေါ့..။
မဲ၆သန်းမှာ… ၉၀%လောက်က… အဖွဲ့ချုပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဆီပဲသွားမယ်..။။
ဒါတောင် ၂၀% နဲ့တွက်နေတာ..။
အဖွဲ့ချုပ်မဲသွားဆွယ်တော့.. ပျော်ဘွယ်က သံပုန်းတီးထုတ်တယ်…။
သူတို့ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးအောင်… အဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရဖြစ်ချိန်မှာ.. ၂ဆတိုးလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်..။
ပျော်ဘွယ်က ဒီချုပ် က ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ညို မဆုံးခင်ကထိ ဒီလိုမဟုတ်။
ဟိုတခါ မန်းလေးစားညွန် တဂျီး ယူတဲ့ ကောင်လေးက သူ့မြေးး
အခု ဒီချုပ် ရဲ့ မီဒီယာပိုင်းမှာ အလုပ်စဝင်နေတယ်။
တစ်ဆင့် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပါပြီ ခညာ။
ငါတို့ အားလုံးသည် သမ္မတ များ ဖြစ်ကြသည်။